HARGAYSA Dhimasho Iyo Dhaawac Uu Sababay Roob Laxaadle Oo Galabta Hargaysa Ka Da’ay | Haqabtire News
HARGAYSA Dhimasho Iyo Dhaawac Uu Sababay Roob Laxaadle Oo Galabta Hargaysa Ka Da’ay
June 14, 2016 - Written by Wariye Hanad
Ilaa hadda tirada dad aan la xaqiijin ayaa ku geeryooday kuna dhaawacmay roob laxaadle oo dabaylo wata oo galabta ka da’ay magaalada hargaysa. Dadka dhintay ayaa la sheegay in ay guryo ku dumeen, halka dadka dhaawacmayna qaarkood uu ku dumay deyrka dugsiga xalane ama turkiga ee magaalada hargaysa kuwaasi oo ahaa dad deyrka dhiniciisa ku shaqaysan jiray.
Sidoo kale roobkan ayaa khasaare u gaystay Cisbitaalka guud ee magaalada hargaysa iyada oo uu dumiyey qaybtii waalida ee cisbitaalka isla markaana uu jiingada ka qaaday istoodhkii kayda dawada ee cisbitaalka.
Dhinaca kale roobkan ayaa waxyeelo gaadhsiiyey dugsiga turkiga, guryo iyo meherado ku yaala magaalada hargaysa oo uu qaarkood jiingaha ka qaaday, halka badiba xaafadaha magaalada hargaysa uu caawa ka maqan yahay laydhku ka dib markii uu roobku waxyeelo u gaystay xadhkihii iyo birihii laydhka.
Cisbitaalka guud ee magaalada hargaysa ayaa wali lagu soo daad-guraynayo dad dhaawac ah, iyadoo shaqaalaha cisbitaalku ay xaqiijiyeen in dad dhimasho iyo dhaawac isugu jira la keenay cisbitaalka.